Faadumo Waryaa oo soo bandhigta quruxda Soomaaliya - BBC News Somali
Image caption Faadumo Ismaaciil waxay caalamka u bandhigtaa quruxda Soomaaliya
Faadumo Ismaaciil oo ku magac dheer Faadumo Waryaa waxay ku dhalatay kuna barbaartay dalka Sucuudiga balse Muqdisho ayay dib ugu laabteen iyada iyo qoyskeeduba dhawr sanno kahor. Waxay bilowday iyadoo adeegsanaysa baraha bulshadu ku wada xidhiidho inay baahiso muuqaalo iyo sheekooyin ka tarjuamaya nolosha caadiga ah ee dadweynaha iyo goobaha loo tamashlo tago. muuqaalada qaar waxa la daawaday malaayiin jeer boggaga ay ku leedahay snapchat-ka iyo instagram.
Faadumo waxay badanaaba la hadashaa Soomaalida ku dhalatay ama ku barbaartay dalalka carabta iyo carabta laftigooda, waxayna inta badan sheekooyinkeeda ku baahisaa luuqada carabiga. Dhawr jeer oo hore waxa lagu martiqaaday shirrar ay lahaayeen dhalinta carbeed.
Faadumo waxay BBC u sheegtay inay quruxda dalka u soo bandhigto caalamka gaar ahaan dalalka Carabta si ka duwan tebinta dhibaatooyinka kale ee dalka ka dhaca.
Waxaa ay sidoo kale sheegtay in markii ay qurbaha joogtay ay dalka ka aaminsaneyd fikrado kale oo xun balse markii ay dib ugu soo laabatay ay argtay horumarada iyo quruxda dhulka.
"Waxaan bilaabay in aan isticmaalo Snapchat si aan u sawiro magaalada, meelaha ugu qurxoon Soomaaliya, haddey tahay badda Liido, haddey beerta nabadda" ayay tiri Faadumo.
Image caption Faadumo Waryaa
Faadumo waxay sidoo kale ka dhawaajisay in markii quruxda dalka ay u bandhigtay dadka ku sugan qaar kamid ah dalalka Carabta ay weyddiyeen in dalxiis ama ganacsi ay u imaan karaan Soomaaliya.
"Carabo badan ayaa i daawdeen oo is dhaheen Somaaliya ma imaan karnaa, maka furan karnaa ganacsi, maku dalxiisi karnaa, jawiga ayaan ka helnay" ayay tiri Faadumo oo u warrameysay weriyaha BBC ee Muqdisho, Ibraahim Maxamed Aadan.
Waxay sheegtay inay ku guuleystay hamigeedi ahaa in horumarada iyo quruxda dalka ay usoo bandhigto caalamka markii fanaaniin carab ah ay ka codasdeen sawirro iyo muuqaallo ku saabsan nolosha dhabta ee ka jirto Soomaaliya.
Faadumo waryaa waxay sheegtay inay caqabado kala kulantay bulshada marka ay duubeyso muuqallada kuwaas oo ku sheegtay in aysan fahansaneyn howsheeda.